Global Voices teny Malagasy » Lehilahy Bangladeshita Mahalala Izany Hoe Hanoanana Ka Manome Sakafo Mora Vidy Ho An’ireo Ankizy Sahirana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Oktobra 2016 4:19 GMT 1	 · Mpanoratra Pantha Rahman Reza, Tanjim Rahman Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Bangladesh, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Vonjy Voina
Nanomboka tetikasa mizara sakafo ho an'ireo ankizy zanaky ny sahirana ao Dhaka sy ny faritra hafa amin'ny vidiny iray taka Bangladesh monja  (0,013 dolara Amerikana) ny fikambanana atao hoe Bidyananda . Tamin'ny volana Mey no natomboka ny tetikasa, ary tontosaina ao amin'ny distrika enina, anisan'izany Dhaka. Nilaza ny fikambanana fa ankizy sy olona antitra 121.000 no nomena sakafo nanomboka tamin'ny 22 Septambra 2016, ny drafitra dia ny hizara sakafo amin'ny alina 300 farafahakeliny ho an'ireo ankizy niangarana.
Ivon-toeram-panabeazana ho an'ny niangarana ny Bidyananda  izay mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny ankapobeny no mandrafitra azy. Manana sampana dimy manerana ny firenena ny ivon-toerana ary ankizy sahirana maherin'ny 750 no mianatra ao. Kishor Kumar Das  no tompon-kevitra tamin'ny sakafo iray taka, monina ao an-drenivohitr'i Però, Lima izy amin'izao fotoana izao. Raha nanontaniana momba ny tetikasa izy, dia nanazava tamin'ny Global Voices fa zavatra manokana izany:
Tsy ny olon-tsotra ihany, fa nisy koa fikambanana iray antsoina hoe Orina Mpanasoa Serverghost  izay nanatevin-daharana ny tetikasa. Nanome ny vola rehetra azon'izy ireo tamin'ny loka avy amin'ny Google izy ireo hanampiana ny tetikasa Bidyananda.
Hoy  i Kishor Kumar Das raha nanontaniana ny antony maha-iray taka ny vidin'ny sakafo :
Ity tatitra an-dahatsary  mikasika ny tetikasa navoakan'ilay mpisera YouTube Video Vubontao:
Nisy tetikasa tahaka izany ihany koa natomboka tao an-drenivohitr'i Però, Lima. Zaraina sakafo isan-kerinandro ireo ankizy monina eny amin'ny faritry ny mahantra ao Lima. Mitantana orinasa trano fandraisam-bahiny ao Lima i Kishor Kumar Das. Ampiasaina amin'ny fandaniana amin'ity asa soa ity ny tombombarotra avy amin'izany orinasa izany. Andrahoina ao amin'ny lakozian'ny hotely ny sakafo. Raharahan'ny ekipa ny nahandro, miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny vahiny sy ny mpizahantany ao amin'ny hotely .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/07/89336/
 iray taka Bangladesh monja: https://www.facebook.com/1Tk.Meal/?fref=ts
 lalàmpanorenana : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=367
 400.000 eo ireo ankizy niangarana : https://bn.globalvoices.org/2012/11/12/32923/
 Orina Mpanasoa Serverghost: https://serverghosts.org/in/dex/Home91e6.html
 pejy Facebook-n'ny : https://www.facebook.com/1Tk.Meal/posts/1177488142314951
 tatitra an-dahatsary: https://youtu.be/wia8AvrX0x4
 trano fandraisam-bahiny : https://www.facebook.com/search/top/?q=zigzag%20hostel
 fandraisana anjaran'ny vahiny sy ny mpizahantany ao amin'ny hotely: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1793961830850093&id=1747912052121738&match=emlnemFnIGhvc3RlbCxob3N0ZWw%3D